Kolontsaina Sri Lanka ~ Journey-Assist - Fivavahana. Endri-javatra. kanto
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Kolontsaina Sri Lanka
Kolontsaina, filozofma, Fivavahana ao Sri Lanka
Olona sri lanka
Ny kolontsaina Sri Lankan dia niforona nandritra ny 2 500 taona mahery. Amin'ny foto-keviny dia maminany 2 lehibe ao amin'ity nosy ity ary olona 2 no monina ao.
Ny vondrona foko lehibe indrindra any Sri Lanka dia Sinhala, izay mandrafitra ny ankamaroan'ny firenena (maherin'ny 70% -n'ny mponina). Ny faharoa tena be olona indrindra dia ny Tamils ​​(11-12% amin'ny mponina), izay nentin'ny razambe nentina nankany amin'ny nosy tamin'ny taonjato faha-19. Mpanjanja anglisy hiasa amin'ny fambolena dite.
Indianina be indrindra ny Tamils, dia fiteny Tamil ny fiteniny. Bodisianina be dia be ny Sinhalese ary manana ny fitenin'izy ireo Sinhala. Sri Lanka koa dia manana vondrom-piarahamonina silamo sy kristiana, izay avy amin'ny arabo sy ny Eropeana tandrefana.
Kolontsaina Sri Lanka
Karazan-javahady bodista isan-karazany - tsangambato tranainy indrindra taloha indrindra any Sri Lanka. Iaraha-mahita manerana ny Nosy. Ireo dia tempoly kanto, lapa ao an-tanànan'ny antsoina hoe Golden Triangle (Dambulla, Kandy ary Sigiriya) ary stama tsotra (antsoina hoe Dagobas) ny Sinhals.
Ohatra iray mahavariana amin'ny arsitialin'ny fanjanahan-tany dia ny tanànan'i Galle ao atsimo andrefan'i Sri Lanka.
Raha jerena ny isan'ny sary sokitra Buddha, Sri Lanka, miaraka amin'ny habeny kely, dia mitoetra eo amin'ny toerana voalohany eo amin'ireo firenena rehetra eto ambonin'ny tany.
Ankoatra ny maritrano sy sary sokitra, Sri Lanka koa dia manaitra amin'ny sary hosodoko. Ohatra mahavariana amin'ny kanto toy izany dia azo antsoina hoe frescoes bodista mahafinaritra, izay mampiseho ny "virjiny any an-danitra." Ireo asa ireo dia miverina amin'ny 5 Art. BC. f. Any Sigiriya no misy azy ireo - trano mimanda taloha any amin'ny afovoan'ilay nosy.
Zavakanto any Sri Lanka
Ny sary sokitra Sri Lankan Classical, sary hosodoko ary ny maritrano dia mifandray manokana amin'ny Buddhism. Any ambanivohitra, ianao dia afaka mahita saika na aiza na aiza stala isan-karazany. Ny sary sokitra Buddha sasany dia tena lehibe. Ny malaza indrindra amin'ireo "Bouddha lehibe" dia ao Buduruvagal sy Altugam. Ireo tanàna roa ireo dia antitra be. Ny foibe ara-kolontsaina Sri Lankan dia ny tanànan'i Kandy.
Ao amin'ny sehatry ny choreography, Sri Lanka dia malaza amin'ny dihy Sinhalese nentim-paharazana. Mitovitovy amin'izy ireo ny Indiana, saingy tsy mitovy amin'ireo farany amin'ny habetsaky ny singa akrobatika sy ny fanetsiketsehana lehibe kokoa. Any Kandy, afaka mijery ny dihy ny mponina ao amin'ny faritra be tendrombohitra ianao, ary ao Ambalangoda sy Colombo dia matetika manao “dihy manala voly” izy ireo, izay misy dikany fanao - mandroaka fanahy ratsy izy ireo. Mampiseho ny dihy, ny teatra nentim-paharazana, ny fanaovana amponga ary ny fombafomba ara-pivavahana ny fomban-drazana any Sri Lanka. Ny famokarana teatra dia mamorona seho avy amin'ny angano ao Sri Lanka.
Zavakanto nentin-drazana kanto tany Sri Lanka
Ny fahana, ny sary sokitra hazo, ny metaly, ny seramika ary ny fanodinana vato sarobidy dia nahatratra fahaizana asa tanana lehibe. Ny tanànan'i Ratnapura no tena ivon'ny fifanakalozana ara-barotra.
Ny zavamaneno tena fanta-daza indrindra any Sri Lanka dia amponga 2-sion antsoina hoe "take". Ny gadona dia ny karatra fitsidihana mozika tena hita ao amin’io nosy io.
Ny mponina eo an-toerana amin'ny ankapobeny dia manavaka amin'ny fitiavana mozika sy dihy. Ny fampisehoana miaraka amin'ny saron-tava izay mitambatra ny dihy sy ny mozika mozika dia nalamina teto nandritra ny fialantsasatra kely amin'ny haben'ny tanàna iray, ary amin'ny fankalazana ny sehatra nasionaly.
Misy karazan-dihy telo lehibe ao amin'ny Sri Lankans:
Kandy mandihy (Panther na Udekah)
nidina avy amin'ny zava-kanto amin'ny dihy taloha tao amin'ny fitsarana ary ahitana ny singa akrobika be pitsiny izay tanterahin'ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny dihy.
Dihy majika ("rukhunu")
manana fombafomba fombafomba ary matetika ampiarahina amin'ny ody ary fanatitra ho an'ny andriamanitra sy ny fanahy. Ny karazana ruhun malaza indrindra dia ny "Dance of the Devil", izay natao handroahana ny fanahy ratsy.
dia avy any amin'ny faritany mitovy anarana any amin'ny faritra avaratr'i Sri Lanka. Mampifangaro ireo fomba roa voalaza etsy ambony ireo izy ireo.
Fivavahana any Sri Lanka
Ny solontenan'ny finoana ara-pinoana maro dia mipetraka any Sri Lanka. Bodisista ny maro an'isa. Manodidina ny 75% amin'ny mponina ity. Hindus any Sri Lanka 7-8%. Ny Miozolomana no mandrafitra 8-9%. Kristianina - eo amin'ny 6% eo ho eo (indrindra ny katolika). Ny fandinihana sasany dia manome an'i Sri Lanka ho an'ireo firenena mpivavaka be indrindra eto an-tany, ary manambara fa ho an'ny 99% -n'ny mponina ao amin'ity firenena ity, ny finoana dia singa manan-danja amin'ny fiainana.
Ny lalampanorenan'i Sri Lanka dia manome antoka ny fahalalahana ara-pinoana, fa ny Buddhism kosa dia voafaritra ho fivavahana voalohany ("manjaka"). Nandritra ny taona maro, ny fifandonana mitam-piadiana teo anelanelan'ny Bodista Sinhalese sy ny Hindoa Tamil dia tsy nijanona teto teto.
Toe-tsaina Sri Lanka
Ny lanjan'ny horoscope
Anisan'ny mampiavaka ny sain'ny mponina eo an-toerana ny fampiasana tsy tapaka horoscope. Efa any amin'ny hopitaly, rehefa mirakitra ny fotoana nahaterahan'ny zaza ny dokotera, dia manome baiko ny ray aman-dreny ny fikarakarana horoscope marina ho an'ny zaza. Miaraka amin'ny horoscope, safidy maro no atolotra avy hatrany ho an'ny taratasy izay hanombohan'ny anaran'ilay zaza vao teraka. Rehefa mikasa trano vaovao, ny Sri Lankan dia mila “hifanaovana” amin'ireo kintana ihany koa. Noho izany antony izany dia tsy mahazatra ny fividianana trano vita. Rehefa dinihina tokoa, ny trano dia tsy maintsy aorina ho an'ny olona iray voafaritra.
Na ny Sri Lankans (voalohany indrindra, mazava ho azy fa ireo izay monina ao an-tanàna) dia mifoha maraina - matetika amin'ny 4-5 ora. Na dia alohan'ny fiposahan'ny andro aza, amin'ny maizina, ny mponin'ny tanàna eo an-toerana dia mahandro sakafo ho an'ny tenany, manasa, manangona ankizy any amin'ny akanin-jaza sy sekoly.
Noho izany, raha mikasa ny hipetraka tsy any amin'ny hotely ianao, fa amin'ny trano manofa any ambanivohitra, tokony hitady trano izay lavitra be indrindra amin'ny trano hafa miaraka amin'ny mponina eo an-toerana ianao. Raha tsy izany, dia mila mifoha maraina koa ianao.
Hira amin'ny fiainan'ny Sri Lankans
Sri Lankans tena tia mozika - na ny nentin-drazana na maoderina ivelany. Avy amin'ny sakafo antoandro ka hatramin'ny filentehan'ny masoandro, maro no mihaino hira ao an-trano izay avadika amin'ny feo avo. Ka tsy voahaja tanteraka eto ny habaka manokana. Na izany aza, izany dia mihatra amin'ny fiainana any amin'ny trano voofana sy trano fotsiny. Ao amin'ny hotely, somary mahazo aina ny fepetra.
Ny fampitana ny fifandraisana any Sri Lanka
Ny eo an-toerana dia milaza fa tsia amin'ny fihetsika. Ny fikoronana ny lohany miankavia sy havanana dia midika hoe "tsia", ary any Sri Lanka dia midika hoe "eny". Amin'ny voalohany dia mety ho sarotra ny zatra azy. Mety ho tsy be fitiavana ilay Sri Lankans ary mamaly fotsiny ireo fanontaniana sy fangatahana fotsiny. Toa hafahafa toa hafahafa rehefa ampifangaroana miaraka amin'ny tsiky. Mila tadidinao avy hatrany fa ny fanintsanana ny lohanao amin'ny lafiny ankavia dia fihetsika fifanarahana fa tsy fandavana.
Fitaka sy fisaraham-panambadiana ao Sri Lanka
Ny mpizaha tany lainga dia iray amin'ireo fotoana faran'izay tian'i Sri Lanka. Mandritra izany fotoana izany dia manavaka ny fisakaizana sy mandray vahiny izy ireo. Raha manofa trano avy any Sri Lankan ianao na manana fifandraisana akaiky amin'ny iray amin'izy ireo dia ho olona mahatoky anao tokoa io olona io ary ho afaka hanampy raha ilaina izany. Na izany aza, ny mpizahatany dia mamitaka ny mpizahatany any amin'ny tobin-tsolika, fifanakalozana, baza ary taxis no tena andraikiny. Ohatra, any amin'ny biraon'ny fifanakalozana dia banky 20 rupees fa tsy 200 dia azo ampidirina kitapo vola be ao an-toerana.Ny mpamily Tuk-tuk dia matetika manampy ny 2-3 km amin'ny halavirana ankehitriny rehefa manao kajy ny lalana.
Mivarotra ny vidin'ny mpizahatany in-2-3 ny mpivarotra eny an-tsena (fa miaraka amin'izy ireo, mazava ho azy, afaka mahomby ny vidiny). Manakaiky ny gara na amin'ny gara, ianao dia afaka mifanena amin'ny mpamily fiarakaretsaka izay milaza fa nofoanana ny fiaran-dalamby, ka ny lalana tokana ahafahanao miditra any amin'izay mila alehanao dia ny hiditra ao anaty fiarany.